तिलोत्तमाको वडा नं. १२ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र संचालन – Sansar Post
Home ≫ अर्थ ≫ तिलोत्तमाको वडा नं. १२ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र संचालन
तिलोत्तमाको वडा नं. १२ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र संचालन
संसारपोस्ट संवाददाता · २३ कार्तिक २०७७ · 0
तिलोत्तमा, २३ कात्तिक । तिलोत्तमा नगरपालिकामा एउटा आयुर्वेद औषधालयसहित सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १४ पुगेको छ । आइतबारबाट वडा नं. १२ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १४ पुगेको हो ।
वडा नं. १२ को मोहनाजोत भाटामा स्थापना भएको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले उद्घाटन गर्नुभयो । हरेक वडामा कम्तिमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुर्याउने नीतिअनुसार तिलोत्तमामा स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाको कामले तीव्रता पाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमैं वडा नं. ९ मा समेत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी छ । स्वास्थ्य केन्द्रका आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनहरु पनि निर्माण भैरहेका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य उपचार, परिवार नियोजन, पोषण तथा एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन, गर्भवती जाँच तथा सुत्केरी जाँच, खोपलगायतका सेवाहरु उपलब्ध छन् । कार्यक्रममा नगर उप–प्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी, वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष सहदेव थारु, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोतिप्रसाद पौडेल, सिनियर अहेव अधिकृत गणेश गौतमलगायतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा.पौडेलको स्कुटर सिक्दा मृत्यु